IHuawei P Smart + 2019: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokwazisa ngokusesikweni | I-Androidsis
Ekupheleni kuka-2018 uHuawei wazisa i-smartphone yakhe entsha kuluhlu oluphakathi, IP Smart 2019. Inketho elungileyo kweli candelo lentengiso, elishiye neemvakalelo ezilungileyo nakuhlalutyo lwakho. Uphawu ngoku lusishiya nendlalifa yale fowuni, kuba ngoku bonisile iHuawei P Smart + 2019. Inguqulelo ephuculweyo yefowuni yangaphambili.
Umahluko phakathi kweemodeli ezimbini awukho mkhulu kakhulu. Kuba le Huawei P Smart + 2019 isebenzisa uyilo olufanayo kwaye yabelana ngenxalenye enkulu yeemodeli zangaphambili. Nangona kule meko, esinye sezimanga ezikhulu esizifumana ngasemva. Njengoko ikhamera kathathu isetyenzisiwe.
Siyabona ukuba iikhamera ezininzi zifumana njani ubukho phakathi kuluhlu oluphakathi kwi-Android. U-Huawei ujoyina ngoku usebenzisa le khamera iphindwe kathathu kwisixhobo. Olona tshintsho luphambili lokushiya kuthi le Huawei P Smart + 2019. Nangona iseyindlela yokukhetha umdla omkhulu kweli candelo liphakathi kwi-Android.
1 Ukucaciswa kweHuawei P Smart + 2019
Ukucaciswa kweHuawei P Smart + 2019
IsikriniI-6,21 ye-intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo kunye ne-19,5: 9 ratio
Ikhamera esemva:I-24 MP + 16 MP + 2 MP
Ke ngoko, olona tshintsho luphambili silufumana kule smartphone kugxile kwikhamera yayo. Ukudityaniswa kwee-sensors ezahlukeneyo kuye kwaziswa, ukubheja kwizinto ezintathu kule meko. Oko kwenza ukuba iHuawei P Smart + 2019 ibe yinto egqibeleleyo kule ndawo, xa kuthelekiswa nemodeli yangaphambili.
Le modeli intsha ineelensi ezintathu, nazo ezinezisombululo eziphezulu. Nganye yezi lens inenjongo ethile, ke indibaniselwano inamandla ngakumbi. Ngale ndlela, isivamvo esiphambili sisisiqhelo esiqhelekileyo, Okwesibini yikona ebanzi ye-ultra ngelixa ukuba isithathu sisixhobo esinoxanduva lokulinganisa ubunzulu kunye nokuphucula imo yemizobo ngalo lonke ixesha.
Ukongeza, njengoko bekulindelekile, ubukrelekrele bokwenza buyaxanduva lokuphucula iikhamera zale Huawei P Smart + 2019. Inesakhono sokwenza njalo qaphela ukuya kuthi ga kwimiboniso eyahlukeneyo engama-500, Kunye namahlelo emifanekiso engama-22. Ke intsebenzo elungileyo kakhulu kulindeleke kubo malunga noku.
Njengomnye umfuziselo, le Huawei P Smart + 2019 isungulwe ngemibala emibini, zombini zineziphumo ezithandwayo zokuthi uphawu lwenziwe ukuba lube nefashoni kunyaka ophelileyo. Inye kuphela indibaniselwano yesixhobo ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Nangona okwangoku singenayo Akukho lwazi malunga nomhla wokukhutshwa okanye ixabiso lentengiso.
Sinethemba lokwazi okungakumbi ngayo kwiiyure okanye kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. I-Huawei iqinisekile ukubonelela ngolwazi oluthe kratya koku kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHuawei P Smart + 2019: Uluhlu oluphakathi lwegama elitsha